Dzidza kumisikidza Musoro Pointer mu macOS kufambisa iyo inotora uye tinya | Ndinobva mac
Apple inosanganisira akawanda akasiyana ekuwanikidza maturusi mune ayo mashandiro masisitimu, achibvumira vanhu vazhinji kuwana software yayo uye maturusi pasina kushandisa zvakajairika nzira. Kunyange izvo zvakagadzirirwa vashandisi vasingakwanise kushandisa keyboard kana mbeva, chero munhu anogona kushandisa zvakafanana mabasa uye Head Pointer ndeimwe yacho. Isu tinongofanirwa kuvamisikidza uye nekuchinja mamwe marongero. Ngatione maitirwo azvo.
Usati watanga. Ndinoda kukwanisa kushambadzira kuita uku. Musoro Pointer yaisanganisirwa neMacOS Catalina. Zvichitaurwa zviri nyore, shandura musoro wako uve mbeva. Iine webcam yakanongedzwa kumushandisi, chishandiso chinogona kutarisa kutenderera kwemusoro wemushandisi, padivi-padivi kana kurudyi, uye fambisa chinongedzo pachiratidziri nenzira iyoyo.
Musoro Pointer inowanikwa mune Yekushandisa menyu System Zvaunoda. Sezvo mbeva ichiri kushandisika uye ichikunda chero kufamba kwemusoro, ino sisitimu inogona kufambisa iyo inotora padhuze nepano mushandisi inotarisira kuishandisa, nekungofambisa musoro uye kutarisisa. Ipapo mbeva inogona kushandiswa kunyatsoita musarudzo.
Ngatipindei mumatambudziko. Ngatigonei Mushe Mushe
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kumisikidza webcam yeiyo Mac. MacBooks ine iyo FaceTime kamera, Inogona kushandiswa, asi runako chero mudziyo wekufungidzira iwe waunogona kubaya mune iyo komputa inofunga kuti webcam ichaita.
Tinodzvanya paApple icon mune menyu bar uye sarudza:
Sarudzo dzeSystem-> Kugoneka.
Isu tinodzika pasi kuruboshwe uye sarudza Pointer Control. Tinodzvanya pane Imwe nzira yekudzora nzira tab. Isu tinosarudza cheki cheki padhuze ne Bvumira musoro pointer.
Paunenge wagoneswa, macOS tanga kududzira mafambiro emusoro wako kubva pakuona kwewebhu webcam pane kufamba kwembeva. Kana iwe uchida kunatsiridza iwo maratidziro, tinya bhatani reSarudzo.
Iye zvino ndezvekutamba nehurongwa hwesarudzo kusvikira tawana watinoda zvakanyanya. Isu tinokusiya iwe vhidhiyo uko inoratidzwa mashandisiro anoita ino system Kwete zvakaipa kuedza. Asi hongu, tinokuudza kubva zvino kuti kana uchikwanisa kushandisa mbeva kuti uishandise. Kurumidza uye isu tave kujaira kwazviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Dzidza maitiro ekugadzirisa Musoro Pointer mu macOS kufambisa iyo inotora uye tinya